A họpụtara ndị ọchụnta ego iri abụọ na isii nke ndị Afrịka maka afọ ọhụrụ Anzisha Prize Fellow
Ndị ọchụnta ego kacha nta nke Africa na -ere ere n'agbanyeghị ọrịa ọjọọ
Ihe nrite Anzisha ekpughere ndị ọchụnta ego iri abụọ na isii ha kacha elu maka 26. Ndị ọchụnta ego, ndị nọ n'agbata afọ 2021 na 18, onye ọ bụla ga -enweta ihe karịrị US $ 22 na ego yana ihe karịrị US $ 5,000 nke ọrụ nkwado ụlọ ọrụ n'ime afọ atọ, nke na -akwado usoro ọhụrụ mkpakọrịta nke na -enyere ndị na -eto eto aka inweta nkwado ego na ndụmọdụ ha ga -eme nke ọma.
"Anyị ahụla nke ọma na ntụgharị site na ụlọ akwụkwọ sekọndrị ma ọ bụ ụlọ akwụkwọ sekọndrị ozugbo na azụmaahịa na -adigide chọrọ nkwado ego na mmụta," kwuru Josh Adler, onye isi oche nke ihe nrite Anzisha.
"Site na njikọta ogologo oge anyị na Mastercard Foundation, obi dị anyị ụtọ na ọ bụghị naanị na-ekwupụta mmụba nke ọnụ ọgụgụ ndị enyi anyị nwere ike inye kwa afọ, kamakwa na nkwado ego nke ọrụ ọ bụla ga-enweta."
A họpụtara ndị otu Anzisha nke 2021 site na ọtụtụ narị ngwa n'ofe Afrịka, wee gafere ọtụtụ ọkwa nyocha na nyocha.
Ndị anamachọihe sitere na mba dịka Mali, Togo, South Africa, na Madagascar na azụmaahịa na -aga n'ihu na agụmakwụkwọ, ahụike, ọrụ ugbo, imepụta, ike, na ịma mma. Ndị ntorobịa Afrịka a na -egosi etu ọ ga -esi kwe omume ịchụ nta ego dị ka ọrụ n'agbanyeghị ọrịa a.
Enwekwu nkwado maka ndị ọchụnta ego 26 kacha elu
N'ịhọrọ ndị mmekọ 26 n'afọ a, mkpakọrịta Anzisha kwa afọ amụbaala okpukpu abụọ kemgbe usoro nhọpụta mbụ ya, nke gụnyere 12 ọhụrụ, ndị na -eto eto, ndị ọchụnta ego Africa na 2011.
N'oge ahụ, ndị otu nkwado ụlọ Anzisha esorola ndị ọchụnta ego dị afọ 150 rụọ ọrụ ihe karịrị mba iri atọ n'Afrịka.
Anyị ewepụtala ụzọ ịsụ ụzọ maka nkuzi, mmepe nka, na nkwado azụmaahịa nke etinyerela ugbu a n'ime njem mmụta afọ atọ.
"Enweela onyinye nke mkpakọrịta anyị ka ọ bụrụ ihe ọzọ ma ọ bụ nkwado agụmakwụkwọ mahadum maka ndị ọchụnta ego nọ n'afọ a," na -agbakwụnye Adler.
"Nnukwu ihe nrịba ama, nke ghọtara ihe ịga nke ọma tupu ahọpụta onye otu gị, ga -amata ugbu a ịdị mma site n'aka ndị ọchụnta ego na -eto eto bụ ndị na -esetịpụ ụdị ọrụ, uto, ịkọ akụkọ na mmezi usoro n'oge mkpakọrịta ha."
Ndị ọchụnta ego iri abụọ na isii ahọpụtara na -anọchite anya mba 26 ebe 17% bụ asụsụ Francophone. Ha gụnyere Côte d'Ivoire, Democratic Republic of Congo (DRC), Kenya, Madagascar, Nigeria, Mali, South Africa, Tanzania, Togo, Uganda, na Zimbabwe.
Naịjirịa nwere ndị otu kacha ibu nwere mmadụ anọ n'ime mmadụ iri abụọ na isii kacha elu.
“Ndị ọchụnta ego na -eto eto n'Afrịka egosila mgbe niile na ha nwere ike imeri ihe ịma aka ahụ ma enyere ha ohere. Na ihe ọnwa 19 siri ike ọ bụụrụ ụwa anyị.
N'agbanyeghị oke nke ndị na -emepụta ihe ọhụrụ anyị na -ahụ mgbe niile ka ọ na -emetụta mmemme a, na -egosi na enwere ike nyefe ndị na -eto eto nrụzigharị na ịtụgharị akụ na ụba.
Anyị kpebisiri ike ịkwado uto nke Anzisha Prize na ịkụ nzọ na ike nke ndị ọchụnta ego na -eto eto ga -ebute mgbanwe, ” Philip Cotton na -ekwu, onye isi mmepe obodo mmadụ na Mastercard Foundation.
Mgbe usoro nhọpụta ahụ gasịrị, ndị ọchụnta ego ga -esonye na ebe a na -adọba akpụkpọ ụkwụ maka ụbọchị 10 ebe ha ga -eso ndị isi azụmaahịa na ndị meriri n'oge gara aga nweta ihe nrite. Ogige akpụkpọ ụkwụ ga -akwado ha maka ihe dị n'ihu n'ime afọ atọ na -abịa.
Iji chọtakwuo otu esi ahọpụta ndị kacha elu iri isii na isii n'afọ a, lee ihe nkiri Quest -usoro nwere akụkụ anọ na-eso otu Anzisha Prize na ọchụchọ ha maka ndị ọchụnta ego kacha nta n'Africa.
Ngwa Anzisha Prize maka ndị otu azụmaahịa 2022 mepere Wenezdee, Ọktọba 20, Ọktọba 2021.
A na -adụ ndị ọchụnta ego tozuru oke ka ha budata ntuziaka ngwa ma ọ bụ tinye akwụkwọ maka ihe nrite Ebe a.